दिनहुँ अदुवा हालेको चिया पिउनुहुन्छ ? यो समाचार पढ्नुहोस् – live 60media
दिनहुँ अदुवा हालेको चिया पिउनुहुन्छ ? यो समाचार पढ्नुहोस्
एजेन्सी । चियामा अदुवा सबैलाई जिव्रोमा मिठो श्वाद दिन्छ । जाडो महिनामा त यो सबैलाई नभई नहुने बस्तु हो । जाडोमा चिया त्यसै पनि धेरै पिइन्छ त्यसमा अदुवाको श्वाद लोभलाग्दो हुन्छ । तर तपाईले दिनहुँ अदुवा राखेर चिया पिउने गर्नुभएको छ भने आफ्नो श्वास्थ्यको ख्याल राखेर त्यसलाई केही कम गर्नुहोला ।
अदुवा हालेको चिया लोकप्रिय छ । चिसो मौसममा धेरैजसो मानिसहरु अदुवा हालेको चिया पिउन मन पराउँछन् । तर अत्यधिक अदुवा हालेको चिया पिउँदा स्वास्थ्यका लागि नोक्सानी गर्छ । अत्याधिक अदुवा हालेको चिया पिउँदा हुन सक्ने स्वास्थ्य समस्या यस्ता छन् ।
पखाला : अदुवा हालेको चिया अत्यधिक पिउँदा पखाला लाग्ने खतरा बढ्छ । अदुवाले पाचन प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ र बेचैनी पैदा गराउँछ ।
उच्च र क्त चाप : जो व्यक्तिमा उच्च र क्त चापको समस्या छ त्यस्ता व्यक्तिहरुले अदुवा हालेको चिया पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । तर जो व्यक्तिको र क्त चाप सामान्य छ ती व्यक्तिका लागि अदुवा हालेको चियाले खासै फाइदा पुर्याउँदैन । यसको सेवनले चक्कर लाग्ने र कमजोरी हुने गर्छ ।
कपाल : अत्यधिक अदुवा हालेको चिया पिउँदा कपाल झर्ने समस्या पैदा हुन्छ । अदुवामा हुने जिन्जरोल नामक तत्वले कपाल बढ्न रोक्न सक्छ ।
जलन : अदुवा हालेको चिया पिउँदा शरीरमा जलन उत्पन्न हुन्छ । अदुवामा हुने जिन्जरोलले पेटमा धेरै एसिड पैदा गर्छ र जलन पैदा हुन्छ ।
निन्द्रा: अदुवाको चियाले निन्द्रामा समस्या उत्पन्न हुन्छ । अदुवा हालेको चिया सुत्नुअघि पिउनु हुँदैन ।
← श्वेतासंग वि’वादपछि लाखौ खर्च गरेर सुष्मा दिइन् कल्बमा पार्टी, को पुगे उनको पार्टीमा ? (भिडियोसहित)
प्रेमदिबसकै दिन कन्चन पुगे कोमामा ! दियो निभ्नै लाग्यो,अनिशालाइ यस्तो सन्देश पठाइन निरुले ( भिडियो ) →